Izixhobo zegadi - iKangton Industry Co., Ltd.
Blower (umbane, ipetroli)
Zininzi izinto onokuzenza nge-blower, kodwa ayinyanzelekanga ukuba uyenze. Ungayisebenzisa,, xa ususa amagqabi ekwindla kumhlaba ovulekileyo nakwiindlela. Esi sisixhobo esinamandla nesinokuthenjwa esenza ukuba ukucoca okukhawulezayo kunye nokusebenziseka lula kweendawo ezivulekileyo kunye neencingo. Iingcali zokhathalelo lwegadi ezifuna isixhobo esinamandla ngakumbi kunye nexesha elide lokusebenza, kwelinye icala, i-petroli yegqabi le-petroli lukhetho olukhethiweyo.
Xa ucheba ingca, umda omncinci wengca uhlala ushiyekile ekunzima ukufikelela kuwo kunye nomatshini wokucheba ingca. Kulapho ukucoca ingca kunokunceda khona, ukuvumela ukuba ingca ihanjiswe ngaphandle kwamandla. Esi sixhobo sikwanceda ukugcina ukhula lusemaphethelweni apho lunokubanobunzima kwindawo ekunzima ukufikelela kuyo.
Ukugubungela zonke izicelo zomsebenzi wehlathi ukuya ekhayeni, egadini, kwi-DIY kunye nokusika iinkuni, uluhlu lwemveliso yeKangton luqulathe iisarha ezahlukeneyo zetyathanga.
Uxinzelelo oluphezulu lokususa ubumdaka: Ukucoca imoto, isithuthuthu okanye ibhayisekile, ukucoca iindawo ezibanzi okanye ukucoca ifenitshala yegadi yasentwasahlobo; yonke le misebenzi yenziwa ngokukhawuleza kwaye ngokulula ngokucoca uxinzelelo. Ezi zixhobo zikwenza ukuba usebenze ngokuchaneka ngokuchanekileyo okanye ngaphezulu kwendawo ebanzi, kwaye nokuba ngobumnene okanye ngamandla, kuxhomekeke ekubeni ufuna ukunika imoto yakho isipili okanye ususe ukhula kwizikhewu ezisendleleni yegadi. Kwangelo xesha isicoci soxinzelelo ikwasisixhobo esinobungozi kwindalo, kuba ikuvumela ukuba usebenze ngaphandle kokusebenzisa izixhobo zokucoca iikhemikhali.
Umatshini wokucheba ingca (ngombane, ipetroli, irobhothi)
Ukusuka kwingxolo ephantsi, ukukhanya okucoca umbane kunye ne-cordless petrol, i-Kangton inemodeli elungileyo nokuba yeyiphi na imfuneko. Ezona zibonelelo zibalulekileyo zemower lawn zombane kukuba zinobunzima obuphantsi kwaye azingxoli kakhulu. Imodeli yepetroli, kwelinye icala, inika uluhlu olude kunye nokuguquguquka okukhulu.
Ingasetyenziselwa ukusebenza kakuhle kwe-atomize, imbewu kunye nokufaka umgubo okanye iimveliso zegranular, ukugcina ixesha kunye nokuququzelela ukuvuna i-cocoa, ikofu, iti kunye ne-chestnut. Esi sixhobo sinokusetyenziselwa ukubetha, ukuqinisekisa ukucoceka kweendawo zokugcina, ukufaka igalelo kumgangatho wembewu.